WARBIXIN IYO XOG LAGA HELAY: Halkii lala aaday Hubkii faraha badnaa ee Muqdisho lagu dhex watay? | jubbaland news
WARBIXIN IYO XOG LAGA HELAY: Halkii lala aaday Hubkii faraha badnaa ee Muqdisho lagu dhex watay?
Wasaaradda amniga Somaliya ayaa sheegtay inuu yaraaday hubkii faraha badnaa ee Magaalada Muqdisho dhexdeeda lagu dhex wadan jiray, taasina ay suurageliyeen ciidamada ammaanka Muqdisho.
Afhayeenka Wasaaradda amniga Gudaha Axmed Maxamed Maxamuud (Sayid Carab) oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay ciidamada xasilinta inay suurageliyeen hubkii cuslaa ee Magaalada lagu dhex wadan jiray inuu yaraado, waxaana uu sheegay in hadda amni buuxa la dareemaayo.
Sayid Carab ayaa sheegay masuuliyiinta Dowladda ee markii hore wadan jiray gaadiid dagaal iyo ilaalo fara badan hadda inaysan jirin, wuxuun tusaale u soo qaatay Wasiirada qaar ee Xukuumadda oo ay la socdaan ilaalo gaaraysa afar askari kaliya.
“Ciidanka xasilinta waxa ay suurageliyeen in nabad laga dhigo Magaalada hubkii waaweynaa ee Magaalada lagu dhex wadan jiray sida BKM iyo ilaaladii faraha badneyd meesha waa ay ka baxeen, taasina waxa ay ku timid ammaanka Magaalada Muqdisho oo hagaagay.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda amniga.
Sidoo kale afhayeenka Wasaaradda amniga Axmed Carab, ayaa ugu baaqay shacabka Somaliyed inay fahmaan cidda bartilmaameedka ah inay yihiin Bulshada, Shabaabna xilli kasta ay isku dayaan inay dhibaateeyaan dadka rayidka ah.
Bulshada ayuu ugu baaqay inay door muuqato ka qaataan suggidda ammaanka iyo ka hortagga falalka suuragalka ay tahay inay Shabaab maleegaan.
Qaraxyadii ka dhici jiray Magaalada Muqdisho ayaa yaraaday, kadib markii Dowladda ciidan badan ay dhigtay wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho